Gini bu ihe eji eme ugbo ala eji agwo ori?
site na nhazi na 20-07-17
Ọtụtụ ndị na-enwe anyaụfụ ka ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ochie na-eji nkà na-akwọ ụgbọala nke ọma. N'ezie, ha niile na-apụ na novice nzọụkwụ site na nzọụkwụ. Ha achịkọtala ọtụtụ ahụmịhe tupu ha enwee ike ịnya ụgbọ ala n'enweghị nsogbu. Kinddị ndị ọkwọ ụgbọala na-amasịkarị bụ onye na-anya gwongworo. Hà ibu ugbo ala i ...
Nke ahụ bụ Nhọrọ N'ihi A Cart Cart
Na ndụ anyị, a na-eji ụgbọ ahụ eme ihe ebe niile. A na-ejikarị ya na họtel, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ, lọjistik, kwa ụbọchị, ụlọ ahịa, mpaghara ụlọ ọrụ na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Ọ nwere ike idozi ọtụtụ nsogbu njem njem ma wetara ndị mmadụ ezigbo nnabata. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịzụta oche dị larịị nke na-adịchaghị mma,…
Ihe Omuma Wire Mesh
Nhazi nke ugbua nke igwe eji acho acho acho nke igwe anaghị agba nchara na nke alumini, waya waya nke ihe eji eme ya, akwa ihe eji eme ya, ọla ahu, akwa udiri, udiri acho acho acho, wdg nke ozo, ka anyi were. ..